Bitcoin ikhanda lemakethe
Bitcoin ivolumu yokuthengisa namuhla nedatha yomlando ye-Bitcoin imali enkulu kusukela ekuqaleni kokuhweba emakethe yokushintshaniswa kwe-izimali zeDividenti.
Bitcoin izimali ezinkulu
Imali yamakethe yanamuhla ye Bitcoin yi 0 US dollar .
Bitcoin capitalization ivuselelwa kanye ngosuku. Bitcoin ulwazi oluvulekile. Imininingwane yokwenziwa imali kwe- Bitcoin isethenjwa kuphela. Bitcoin cap cap yemakethe namuhla ilingana no- 0 amadola aseMelika.
Bitcoin ivolumu yokuhweba
Ivolumu ye- Bitcoin yanamuhla i- 0 US dollar .
Bitcoin ivolumu yokuhweba namuhla - 0 amadola aseMelika. Bitcoin yethulwa kwiwebhusayithi nsuku zonke. Bitcoin ukuhweba eku-inthanethi okugcinwe kakhulu kuma-cryptoexchanges akwi-inthanethi, iwebhusayithi yethu ikhombisa inani lokuhweba eliphelele le- Bitcoin ngosuku. Bitcoin cap yemakethe inyuke ngo- $ 0.
Bitcoin ishadi lesikhwama semakethe
Bitcoin capitalization yemakethe kugrafu ngeminyaka. 0% njalo ngenyanga - ushintsho ekwamukelweni kwemali emakethe Bitcoin. 0% - Bitcoin. Namuhla, Bitcoin capitalization ilinganiselwa ku- 0 amadola aseMelika.
Ishadi levolumu ye-Bitcoin